Myanmar-3 Unicode Installation Methods | panchitthu
Myanmar-3 Unicode Installation Methods
by panchitthu in Myanmar3Unicode
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် တိုးတက်မှုတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာတာဟာ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသား
တွေအတွက် ဂုဏ်ယူစရာများသာ ဖြစ်ပါတယ်..၊ အဲဒိအတွက် ခေတ်နောက်ကျ မကျန်ခဲ့စေဖို့ ကျနော်တို့တွေ
စဉ်ဆက်မပြတ် လေ့လာနေကြရပါပြီ… .။ လက်ရှိကျနော်တို့ ကွန်ပြူတာတွေမှာ မြန်မာစာကို တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် Myanmar NLP(Myanmar Natural Language Processing) ၊ ဇော်ဂျီ၊ ဧရာ ၊ သံလွင် ၊ My Myanmar၊ ပိတောက် ၊ ပုရပိုဒ် စတဲ့ အဖွဲ့များက မြန်မာဖောင့်တွေကို ယူနီကုဒ်ရဲ့ စံချိန် စံညွှန်းမှီဖြစ်ဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်..(လက်တလောမှာတော့ အသုံးများတာက ဇော်ဂျီပေါ့.)၊ အဲလိုကြိုးပမ်းခဲ့ကြရာမှ တစ်စတစ်စ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာခဲ့ပြီး ယခုဆိုလျှင် Myanmar NLP မှ ယူနီကုဒ် ၅.၂ စံစနစ်ကို လိုက်နာတဲ့ Myanmar3 ဆိုပြီးထွက်ရှိလို့လာခဲ့ပါပြီ.. ဒါပေမယ့် အရိုးစွဲနေပြီးသား ဇော်ဂျီလက်ကွက်ကနေ မပြောင်းလဲချင်တာကြောင့် ယူနီကုဒ်အစစ် ကိုသုံးဖို့လက်တွန့် နေကြတာတွေရှိပါတယ်.။ အဲဒိအတွက်လည်း ဇော်ဂျီလက်ကွက်အတိုင်း အသုံးပြုလို့ရအောင်ဖန်တီးပေးထား ကြပါတယ်.. နောက်မှ သူ့မူရင်းလက်ကွက်အတိုင်း ဖြည်းဖြည်းချင်း ရိုက်ကြည့်နိုင်ကြမှာပါ..။ မူရင်းလက်ကွက်ရဲ့ အားသာချက်တွေကတော့ ဇော်ဂျီဝမ်းမှာ Tide key နဲ့တွဲသုံးတဲ့ အက္ခရာမျိုးတွေ (ဤ ၊ ၌ ၊ ၍ ၊ဿ၊ ပါဌ်ဆင့် များ ၊ စသည်များ)ကို Shift key နဲ့ သုံးနိုင်ခြင်း ၊ တစ်ချောင်းငင် ၊နှစ်ချောင်းငင် အတိုနဲ့ အရှည်တွေကို (ု၊ူ) (ု၊ူ) Shift key ကို သုံးနေစရာမလိုပဲ တွဲသုံးရမယ့် အက္ခရာ အလိုက် အစဉ်ပြေအောင် ဖန်တီးပေးထားခြင်း. ၊ (ြ – ၊ြ — ) တို့ကို key တစ်မျိုးတည်း အသုံးပြုနိုင်ခြင်း ၊ နောက်ပြီး ယခု လက်ရှိမှာ ဇော်ဂျီတို့ဘာတို့မှာ မြန်မာလက်နှိပ်စက် တွေ အတိုင်း ရိုက်ရတဲ့ စာလုံးတွေ ကို တကယ့် စာရေးတဲ့အတိုင်း အသံထွက်ပြီးရေးလို့ရအောင် ဖန်တီးထားခြင်းတို့ စသည့် စသည့် အားသာချက်များ ရှိနေပါပြီ ..။
ပြောင်း = သဝေထိုး + ယရစ် + ပစောက် + ရေးချ + င သတ် + ၀စ္စ ၂ လုံးပေါက် (ဇော်ဂျီဝမ်း)
ပြောင်း = သဝေထိုး + ပစောက် + ယရစ် + ရေးချ + င သတ် + ၀စ္စ ၂ လုံးပေါက် (Myanmar3)
ဥပမာအရ ကျနော်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းက စာရေးရင် အော်ရေးသလို ရေးကြည့်လိုက်ရင် ဇော်ဂျီ က မှားနေပါတယ်..
ဒီလိုအနေအထားက အားသာချက်တစ်ခုပါပဲ.. ဒါပေမယ့် လက်တလောအခြေအနေမှာ ကျနော်တို့အနေနဲ့ Myanmar3 ယူနီကုဒ် ကို ပြောင်းသုံးပေမယ့် ဇော်ဂျီကိုလည်း ချက်ချင်းကြီး လက်လွှတ်လို့မရနိုင်သေးပါဘူး..
အများစုက ဇော်ဂျီနဲ့ ပဲ အကျွမ်းတ၀င်ဖြစ်နေခဲ့ကြတာကိုး..
မြန်မာစာအနေနဲ့ ယူနီကုဒ်စံ ထဲမှာ ပါဝင်လာခြင်းက တကယ့်ကို ကြီးမားတဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုကြီးပါပဲ.. ကျနော်တို့ တစ်ချိန်က ဇော်ဂျီဝမ်းတို့ ဘာတို့ မပေါ်သေးခင်က Microsoft word တို့ Page Maker တို့မှာ Win Font တွေ ၊ CE Font တွေ အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်..သုံးဖူးသူများ ပြဿနာပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင်နဲ့ လည်ပတ်ခဲ့ကြဖူးမှာပါ.. စက်တစ်ခုက Win-InnWa နဲ့ ရေးလိုက်တာ ကို တခြား ၀င်းအင်းဝ မရှိတဲ့ စက်မှာ အင်္ဂလိပ်စာလုံး ပေါက်ကရတွေပေါ်တာမျိုးတွေ ၊ Win Font တွေကို CE Font တွေကနေ ပြန်ဖတ်မရတာတွေ၊ ဒ ဓ ရိုက်လို့အဆင်မပြေတာမျိုးတွေ၊ တစ်ချို့ ပါဌ်ဆင့်တွေ ရိုက်ချင်ရင် Alt key နဲ့ နံပါတ်တွေ ကို အလွတ်ကျက်ထားရတာတွေ.. စသဖြင့် အဲလိုမျိုးပေါ့.. အခြားပြဿနာတွေလည်းရှိပါတယ်..။
တကယ်တော့ ဒီပြဿနာတွေက ကျနော်တို့ အသုံးပြုနေတဲ့ Operating System ကြီးမှာ ယူနီကုဒ်စနစ်ကို သတ်မှတ်ပြီးအသုံးပြုတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဖောင့်မရှိလို့ပါပဲ.. အထူးသဖြင့် (ထိုင်း ၊ရုရှား၊ ဂျပန်၊ တရုတ်၊ ကိုရီးယား စသဖြင့်သော) နိုင်ငံတွေရဲ့ ကွန်ပြူတာတွေမှာ ကိုယ်ပိုင် ဘာသာစကားပါဝင်တဲ့ OS ကို အသုံးပြုနေကြတယ် ဆိုတာ ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာ နေတဲ့လူတွေ သိကြပါလိမ့်မယ်.. သူတို့ ဘာသာစကားက OS မှာ ပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်.. ကျနော်တို့ ဘာသာစကားလည်း အဲလို ယူနီကုဒ်စံ စနစ်ထဲ ပါဝင်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် နောက်ပိုင်းမှာ မြန်မာဘာသာစကားကို အသုံးပြုတဲ့ Operating System ကို အသုံးပြုလာနိုင်တော့မှာပါ.. အဲလိုအသုံးပြုလာနိုင်ခြင်းအားဖြင့် အင်တာနက်ပေါ်မှာ စာတွေ ရှာဖွေတာက အစ အင်မတန်လွယ်ကူလာတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်.။ ယခုလက်ရှိမှာလည်း ဇော်ဂျီကို သုံးပြီးရှာလို့ရနေပေမယ့် တိကျမှုမရှိသေးပါဘူး တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင် အက္ခရာ အစဉ်လိုက် စဉ်လို့မရနိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ ပြောရင်ရနိုင်ပါတယ်..။
အခြားသော အားသာချက်တွေ အများကြီးရှိပါသေးတယ်.. လောလောဆယ် Win font တွေနဲ့ပဲ ယှဉ်ပြီး စဉ်းစားကြည့်ရင် အလွယ်သိနိုင်ပါတယ်။ ခုတော့ ယူနီကုဒ် Version 5.2 စံ စနစ်အရ Code range (Hexadecimal)U + 1000 “က” အက္ခရာ ကနေ 109F ရှမ်းသင်္ကေတ(အက္ခရာ ၍ နဲ့ဆင်တူသော) အထိ သတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်..။ မြန်မာဘာသာအပြင် တိုင်းရင်းသားဘာသာ စကားတွေလည်း ထည့်သွင်းထားပါတယ်.။
Myanmar3 unicode Installation
ဒီနေရာမှာ လက်ရှိ update ဖြစ်တဲ့ Myanmar3 font နဲ့ အက္ခရာကီးဘုတ်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး Install လုပ်ပါ။
မြန်မာ၃ ဖောင့်ကို Control panel\_Fonts ဖိုဒါထဲသွားထည့်ပါ။ပြီးရင် အက္ခရာကီးဘုတ်ကို အင်စတောလုပ်ပါ။
အက္ခရာကီးဘုတ်ကို အင်စတော လုပ်တဲ့အခါမှာ အောက်ကပုံမှာပြထားသလို မြန်မာ၃ ဖောင့်ကို ရွေးချယ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့။
သင့်အနေနဲ့ ဇော်ဂျီလက်ကွက်ပဲ ကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုရင်လည်း ကိစ္စမရှိပါဘူး ၊ အဲဒိအတွက်လည်း ဇော်ဂျီလက်ကွက်အတိုင်းပဲ ရိုက်လို့ရအောင် စီမံပေးထားကြပါတယ်၊ အဲလို ရိုက်လို့ရနိုင်ဖို့အတွက်
၁။ဒီနေရာကနေ NHM ဆိုတဲ့ ဆော့ဝဲလေးကို ဒေါင်းလုဒ် လုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
၂။ ဒေါင်းလုဒ်ပြီးတာ နဲ့ ကိုယ်ထားချင်တဲ့နေရာမှာ Extract လုပ်ပါ။
၃။NhmWriter.exe ကို run ပါ.. Taskbar ပေါ်ရှိ Tray Icon မှာ ခေါင်းလောင်းပုံလေးကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် ။ မောက်စ်နဲ့ ထောက်ကြည့်ပါ (အလွယ်မှတ်ရန် Alt +1 = Myanmar3) ခေါင်းလောင်းလေး အ၀ါရောင်ပြောင်းသွားရင် Myanmar3 ကိုရိုက်လို့ရပါပြီ။ .. သူက ဇော်ဂျီလက်ကွက်နဲ့ ရိုက်တာကို Myanmar3 unicode နဲ့ ဖော်ပြပေးနိုင်တာပါပဲ.. ဒီလိုဖော်ပြပေးနိုင်ဖို့အတွက် IT ပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုရာဗီ ဆိုသူက စည်းမျဉ်းပေါင်း ၁သိန်းကျော် ပါဝင်တဲ့ Keyboard ဖိုင်ကို ဖန်တီးခဲ့ပြီး India က NHM(New Horizon Media) Company မှ တဆင့် အခမဲ့ဖြန့်ဝေခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
သတိထားရန်။ ။ NHM ကိုအသုံးပြုနေစဉ်မှာ ဇော်ဂျီကိုပြန်ပြောင်းဖို့ Ctrl + Shift ကို နှိပ်လို့မရပါဘူး။
Alt +1 or Alt +0ကိုနှိပ်မှ ခေါင်းလောင်းလေးက ပြန်မှိန်သွားပြီး ဇော်ဂျီကိုပြန်လည်အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနည်းလမ်းကတော့ အက္ခရာကီးဘုတ်ကို အသုံးပြုခြင်းပါ။ နည်းလမ်း(၁)အတိုင်းပါပဲ. 32bit, 64bit ၀င်းဒိုးတွေကို အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးထားခြင်းပါ။
ဒီနေရာမှာဒေါင်းလုဒ်ယူပါ ။ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ဒီနေရာမှာလေ့လာပါ။
အက္ခရာ Input Method
ဒီနေရာမှာ ဒေါင်းလုဒ်ယူပါ.(မူရင်းဆိုဒ်). ပြီးရင် အဲဒိအထဲမှာ Installation.txt လေးကို ဖွင့်ပြီးဖတ်ပါ.။ အဲဒိထဲက ပါတဲ့ Instruction အတိုင်း Install လုပ်သွားပါ။ Install လုပ်ပြီးတာ နဲ့ သူ့ zip ဖိုင်ထဲမှာ Keyboard layout ပါပါတယ်။ ကြည့်ပြီးရိုက်လို့ရပါတယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ဒီနေရာကနေလည်း ကြည့်လို့ရပါတယ်။ စမ်းပြီးစရိုက်တော့မယ်ဆိုရင်
၁။ Note Pad(text document) တစ်ခု ဖွင့်ပါ.။
၂။ Font မှာ Myanmar3 ကို ရွေးပါ ။
၃။ ပြီးရင် Tray Icon နေရာမှာ(ညာဘက်အောက်ထောင့်) Tavultesoft KeyMan 6.2 ကို မောက်စ် တစ်ချက် နှိပ်ပြီး Myanmar3 ကိုရွေးပေးရပါမယ်.။(မရွေးပဲရိုက်ရင် အလွဲတွေပြပါလိမ့်မယ်)
၄။ စမ်းရိုက်ကြည့်ပါ။ အဲဒိအချိန်မှာ အင်္ဂလိပ်ပြန်ပြောင်းချင်ရင် ခုနကTavultesoft KeyMan 6.2 ကနေပဲ ပြန်ပြောင်းရပါမယ်။
သင့်အနေနဲ့ အထက်ပါ နည်းလမ်း ၄ ခု အနက်က တစ်ခု မဟုတ် တစ်ခု အဆင်ပြေအောင် လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Linux အသုံးပြုသူများအတွက်ကတော့ အကုန်အဆင်ပြေသည်ဟုပြော၍ရနိုင်သည်။ (ကျနော်မစမ်းရသေးပါ)
Mac OS အသုံးပြုသူများအတွက်ကတော့ Masterpiece unisans ကိုဒေါင်းလုဒ်ယူပါ။
Zawgyi-One ရော Myanmar3 ကိုပါ ဖတ်လို့ရအောင်လုပ်ခြင်း
သင်ဟာ IE user ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ie.css နဲ့ Myanmar3_IE.reg ဖိုင်ကိုဒေါင်းလုဒ်ယူပြီးတာနဲ့ Myanmar3_IE.reg ကို install လုပ်ပါ ။ ပြီးရင် Option ထဲမှာ Zawgyi-One ကိုပေးထားရပါမယ်.။ ဒါမှ ဇော်ဂျီရော မြန်မာ၃ကိုရော ဖတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်.. အရင်ကတည်းက ဇော်ဂျီကို ဖတ်လို့မရဘူးဆိုရင်အောက်က css ဖိုင်လေးကို ဒေါင်းလုဒ်ယူပါ.. ဖိုင်အနေနဲ့ ဒေါင်းလုဒ်မရရင်ပေါ်လာတဲ့ ကုဒ်တွေကို Note pad မှာ ထည့်ပြီး .css နဲ့save ပေးပါ.. ပြီးရင် IEကိုဖွင့်ပါ.. Tools >Internet Option>click Accessibility > user style sheet မှာ Format document usingmy style sheet ကို အမှန်ခြစ်ပြီး Browse ကနေတဆင့် ထည့်ပေးပါ..။
သင်ဟာ Firefox user ဖြစ်နေရင် ဇော်ဂျီရော Myanmar3 ကိုရော ဖတ်ရှုရနိုင်ဖို့အတွက် အောက်ပါအတိုင်းလုပ်ဆောင်ပေးရပါမယ်…
သင့်အနေနဲ့ Myanmar3 font design ကို သိပ်မကြိုက်ဖူးဆိုရင် Padauk-Zawgyi ဆိုတာရှိပါသေးတယ်။ ပိုလှတယ်လို့တော့ပြောကြတယ်.. စမ်းကြည့်ပါ။
ဒီနေရာကတော့ ၀င်းမြန်မာ ယူနီကုဒ်ပါ.. သူလည်း သူ့ဟာနဲ့သူလှပါတယ်.. လေ့လာကြည့်ပါ။
အပေါ်က အဆင့်တွေအတိုင်း ပြုလုပ်ပြီးရင်
သင့်အနေနဲ့ အောက်ပါ လင့်များကို ၀င်ရောက်လေ့လာပါ။ ကိုးကားထားတဲ့လင့်များလည်းဖြစ်ပါတယ်။
၁။ ယူနီကုဒ် စာစီပုံ သိကောင်းစရာအကျဉ်း
၂။ Install လုပ်ခြင်း
၃။ NHM ထည့်သွင်းခြင်း
၇။ List of Unicode characters
၈။ မြန်မာ ယူနီကုဒ် ဇယား
ဒီနရောမှာ ဘယ် ဖောင့်တွေက ယူနီကုဒ် စနစ်ကို လိုက်နာတယ်ဆိုတာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ဒီနရောမှာ တော့ ဇော်ဂျီနဲ့ ဧရာတို့ ဘာကြောင့် ယူနီကုဒ် မဖြစ်တယ်ဆိုတာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်
ဒီနေရာကတော့ ဇော်ဂျီကနေ မြန်မာ၃ ကိုပြောင်းပေးတဲ့ Converter ပါ… ပြောင်းတာတွေက ၉၀% ကျော်မှန်တယ်လို့ဆိုပါတယ်.. တော်တော်လေးလည်း အဆင်ပြေပါတယ်… သုံးကြည့်စေချင်ပါတယ်။
Unicode နဲ့ ပက်သက်လို့ နားမလည်သေးသူများအတွက် အကျယ်တ၀င့်ကို ကျနော် အားတဲ့အချိန်တွေမှာ မြန်မာလို ရှင်းလင်းတင်ပြပေးသွားပါမယ် ။ဒီနေရာလေးမှာတော့ မြန်မာ့ယူနီကုဒ်တွေ အကြောင်းကို မြန်မာလို သေချာလေး ရှင်းလင်းပေးထားတာကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ လတ်တလော လေ့လာချင်သူများအတွက်ကတော့ wikipedia.com ကနေ တဆင့် လေ့လာပါ။ သိပြီးသား လူတွေအနေနဲ့ကတော့ အချိန်လေးများရှိခဲ့ရင် အောက်က Comment ကနေတဆင့် သင့်ရဲ့ သိထားတတ်ထားတာလေးတွေကို ဆွေးနွေးပေးခဲ့နိုင်ပါတယ်.။
(မှတ်ချက် ။ ။ unicode နှင့် Font ကို ကွဲပြားစွာ နားလည်ဖို့လိုပါသည်။ အထက်ဖော်ပြပါ Myanmar3, Padauk-Zawgyi, WinuniInnWa … စသဖြင့်တို့သည် Unicode 5.2 စံ စနစ်ကို လိုက်နာသော font များ ဖြစ်သည်ဟု နားလည်ရမည့်ဖြစ်ပါသည်။)
အဆင်ပြေကျပါစေဗျာ … 🙂
Ps … http://forum.mmitd.com/
Previous wxPyDict Dictionary (EN-MM-EN) Next One Click Unicode Installer